Iyi kadhi ye iPhone yako 7 inosangana neyemagetsi inki screen | IPhone nhau
Makore mashoma apfuura, imwe smartphone yakauya kumusika iyo yakanyanya kundibata, Yotaphone, chinongedzo chakabatanidza enki yemagetsi kuseri kwechigadzirwa icho chakatibvumidza kuti tibatanidze nemudziyo uku tichichengetedza yakawanda bhatiri. Asi chinouraya ichi hachina kumbove chakakurumbira, pamwe nekuda kwemutengo wakawandisa wazvo, asi nanhasi ndichiri kufunga kuti inogona kunge iri zano rakanaka, kunyanya kune avo vanhu vanoshandisa iyo smartphone kuverenga. Kutenda InkCase isu tinokwanisa kuwedzera kuchengetedzwa kune yedu iPhone 7 pamwe neiyi kesi inosanganisa yemagetsi inki skrini.
Kana iwe uri mumwe wevanhu vanofarira kuverenga munzira yekuenda kubasa kana kumba, kavha iyi yakanaka, nekuti inotibvumidza kusevha yakawanda bhatiri pane yedu iPhone apo isu tichifarira mabhuku edu atinofarira. Iyi kesi inotipa chengetedzo yakanaka kwazvo kune yedu kifaa nekuda kweBubble Pro tekinoroji, iyo inopa kuomarara kunoshamisa uko zvakare kunotendera iyo kuti itore kukanganisa
Iyo yemagetsi inki skrini inotibvumidza isu nekutarisa uye usinga bvumidze iyo iPhone skrini iyo inotevera kalendari kusarudzwa, iwo mabasa atakamirira, kuwedzera kunguva. Nekuda kweiyo Inkcase application isu tinokwanisa kudzora huwandu hweruzivo rwatinoda kuoneka pachiratidziro chatapihwa nenyaya iyi.
Iyo skrini yeInkcase iPhone 7 kesi iri 4,3 inches muhukuru zvinopfuura zvakakwana kuti tikwanise kunakidzwa nemabhuku edu atinofarira chero patinenge tiri. Iyo Inkcase kesi yeiyo iPhone 7, iyo inogadzira Oaxis haina kuronga kuvhura kesi neelektroniki ink screen yeiyo iPhone 7 Plus, kubvira inowanikwa yekuchengetedza kwe $ 99, nemari inochengeterwa madhora makumi matatu pamutengo wekupedzisira painowanikwa yekutengesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Iyi kadhi yeiyo yako iPhone 7 inosanganisa yemagetsi inki skrini
Hupenyu huri nani pasina tambo, yazvino Beats chiziviso ichifumura mahedhifoni matsva